Dadaalka Xabad joojinta K Sudan - BBC News Somali
Dadaalka Xabad joojinta K Sudan
Image caption Dad aad u badan ayaa ka qaxaya guryahooda dagaalka dartii.
Dadaalo ayaa wali la wadaa sidii loo joojin lahaa dagaalkaka socda Koonfurta Sudan, laakiin afhayeenka milatariga ayaa sheegay inay jirto xabad joojin yar.
Hogaamiyaha mucaaradka, Riek Machar, ayaa sheegay in ciidankiisa ay wali gacanta ku hayaan inta badan waqooyiga dalka. laakiin milatariga ayaa sheegaya inay qabsadeen magaalada Malakal, ayna joogaan dibadda magaalo madaxda gobolka Unity ee Bentiu.
Madaxweyne Salva Kiir, ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xabad joojin deg deg ah. Laakiin Machar, ayaa sheegay in loo baahan yahay wadahadal dheeraad ah si loogu heshiiyo kormeer ku haboon wixii lagu heshiiyo, iyo inuu wadahadalka bilaabi doono oo kaliya, markii dowladda ay sii dayso kow iyo tobanka siyaasiyiinta mucaaradka ee la xiray markii dagaalka bilaabmay.